Chọta akwụkwọ ahụaja kachasị amasị gị na Papuh Walls | Gam akporosis
Nye agba ọzọ na akwụkwọ ahụaja ekwentị gị na Papuh Walls
Manuel Ramirez | | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Ihe izizi ị hụrụ mgbe ịgbanwuo ọnụnọ ya bụ mkpọchi mkpọchi na mgbe ahụ na-ahụ ndabere akwụkwọ ahụaja na ọ họrọla iji nye nke ya ọrụ ya kwa ụbọchị. Na akwụkwọ ahụaja a dị ka onyonyo ma ọ bụ ihe ngosi na-enye ihe dị iche site n'oge ruo n'oge nwere ike ịdị mkpa maka ụfọdụ ndị ọrụ nwere ama ha dịka ihe a na-emeziwanye nke ọma na nke kwekọrọ n'ihe nke ndụ ha.
Otu n'ime ngwa ndị a nwere ike ịme ka akwụkwọ ahụaja ekwentị dịkwuo mkpa bụ Papuh Walls. Ngwa a ga-elekọta weta akwụkwọ ahụaja dị iche iche na ekwentị gị n'etiti ọtụtụ ọnụọgụ edemede, nke site n'ụzọ na-abawanye ogo dịka ụbọchị na-aga.
1 Papuh Walls, akwụkwọ eji ede akwụkwọ
2 A akwụkwọ ahụaja ngwa awụnyere
Papuh Walls, akwụkwọ eji ede akwụkwọ
Anyị anaghị eche ihu otu n'ime ngwa ndị ahụ anọgoro na Storelọ Ahịa Play ruo ogologo oge na nke na-abịa na ọtụtụ puku akwụkwọ ahụ aja. Papuh Walls dị naanị izu ole na ole Ma ọ na-abịa na ebumnuche nke ịbụ otu n'ime ngwa ndị kachasị mkpa na ụdị a na akwụkwọ ahụ aja.
N'etiti njirimara ya ọ bara uru ịkọ ya karịa 20 edemede, ihe karịrị 200 mbụ na akwụkwọ ahụ aja na ndi ohuru nke etinyere kwa ubochi n’enweghi mmelite. Uzo oma ya ozo bu ntinye nke ndị na-ewu ewu na akwụkwọ ahụ aja site na ndị nrụpụta dị iche iche dịka LG, HTC ma ọ bụ Google ma ọ bụ ọbụna site na ndị ọzọ ROMS dị ka Carbon, ọ bụ ezie na ha ka nwere ole na ole ịgbakwunye.
Ọ dịkwa mma ịkọba ya kensinammuo ọrụ interface na-enye gị ohere ka ịnyagharịa niile ọdịnaya na ụdị na akwụkwọ ahụ aja maka ekwentị ma ọ bụ mbadamba.
A akwụkwọ ahụaja ngwa awụnyere
Anyị na-eche ihu otu n'ime edemede ndị ahụ ebe enwere ngwa ndị na-ewe oge àjà ọtụtụ puku na akwụkwọ ahụ aja ka ndị ọrụ, ma ihe kacha mkpa banyere ngwa a bụ ikekwe ya ọhụrụ interface ka oge na-emetụ anyị, na mesiri ike na-ede akwụkwọ na-etinye na-aga na-eweta akwụkwọ ahụ aja ọhụrụ kwa ụbọchị. Ya mere ọ bụrụ na ngwa ahụ ị na-eji eme gị ike agwụ gị ma ọ bụ na-akpaghịzi gị ịgbanwe akwụkwọ ahụaja na ekwentị gị, Papuh Walls na-enyere gị aka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nye agba ọzọ na akwụkwọ ahụaja ekwentị gị na Papuh Walls
Kedụ ka asọmpi Moto G 2014 si aga?
Zaghachi cristian Javier moreno
Etu ị ga - esi melite LG G2 gị na nke izizi mbụ nke European firmware D80220H